Ny sampana vokovokomanga dia faly miarahaba antsika rehetra, ny fahasoavan'ny Tompo anie hoaminareo mandrakariva, sy ny fiadanany.
Ny sampana Vokovokomanga dia sampana miady amin'ny fidorohana zava-mahadomelina, nefa tsy izany irery ihany fa dia manabe ny olona amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Marina fa ny zava-mahadomelina dia zavatra ratsy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ary voalazan'Andriamanitra sy ny teniny ihany koa izany: "Tsarovy fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo". Ka noho izany dia mila kolokoloina tsara ny vatana, arovana amin'ny asan'ny ratsy rehetra sy ny filan'ny nofo manotolo. Ny fisotroana toaka, na ny fifohana sigara, fifohana rongony, ireny dia asa fanandevozana ataon'ny devoly avokoa, misy mantsy ireo olona mihevitra ny tenany hoe "tsy andevony", nefa dia fantatra fa efa lasa fisainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany: « fanaranam-po amin’ny ratsy » (Efesiana 5 : 18).
Misy koa anefa ireo olona izay manana olana ka mifidy ny handeha amin'ireny toerana ireny, nefa tsy mahavaha olana izany; vao maika aza mitombo ny olanao. Mety ho avo roa heny na mihoatra izay aza satria, tsy tompon'ny tenanao intsony ianao ka lasa manaonao foana, ireny rehetra ireny anefa dia tsarovy fa avy amin'ny devoly avokoa. Ankehitriny reha mahita isika dia mirongatra ny fidiran'ny olona amin'ny fandraisana zava-mahadomelina, indrindra fa ny tanora izay vao misondrotra. Mahita ny ataon'ireo namana ka dia voasarika ny amin'izany. Nefa tsy sitrak'Andriamanitra ny hahavery antsika amin'izany làlan-diso izany. Ny olona tsy mino sy efa miaramilan'ny satana no manao izany, fa raha olona mbola tonga saina ianao ka afaka miverina amin'ny làlan'ny fahamarinana dia Jesosy Kristy izany. Izy no afaka hanala anao sy hanavotra anao amin'izany fiainan-diso izany. Koa raiso Izy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Izy ilay efa nilaza fa : "Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana". Vonona ny hanala ny gadranao Izy. Atolory azy ny fiainanao manotolo.
Mampahory ny mahita ny mpino midoroka nefa efa nantsoina izao tsy hanolotra ny « momba ny tenany » ho amin’ny fahotana, fa ho an’Andriamanitra ho amin’ny fahamasinana (vakio Romana 6). Ny hoe « momba ny tena » voalaza eto dia ny ratsam-batana sy ny saina amam-pihetseham-po. Raha atolotrao ho an’io fahotana io ireo, dia potehinao ny fahaiza-manao voajanahary ao aminao (eo amin’ny lafiny vatana, saina, fihetseham-po) sy ny ara-panahy izay nomen’Andriamanitra anao sy tian’ny Fanahy Masina hampiasaina amin’ny fanompoana ny Tompo. Koa na dia tokony hanandrana amin’ny fomba azo tsapain-tànana ny maha-tempolin’ny Fanahy Masina ny tenanao aza ianao, tempoly izay tokony hanomezanao voninahitra an’Andriamanitra, dia lasa ampanaovinao fanompoana ny fahotana ny tenanao. Koa na dia tokony ho vavolombelon’ny Tompo aza ianao, dia ianao indray no manokatra làlana hitenenana ratsy ny finoana kristiana. Koa ankehitriny ary ny Tompo miantso anao, tsy tongatonga hoazy akory ny nahatongavanao eto amin'izao site izao, fa efa lahatr'Andriamanitra mba hoentina hamahany ny fiainanao manontolo eo ambany vahoan'ny satana. Tsy mamela anao ho irery ny Tompo.
Raha ny amin'ny maha olombelona dia sarotra ny miala amin'izany fa rehefa miaraka amin'ny Tompo dia mora hoazy ny miala amin'izany rehetra izany.araka ny teniny hoe:« Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin’Ilay mampahery ahy » (Filipiana 4 : 13).
Entina eto ary misy sary maromaro mikasika ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, indrindra fa ny eo amin'ny atidohantsika izany, ireto àry ny fivoaran'izany:
Ny fivoatry ny atidohan'ny olona izay mifoka rongony, sy ny zava-mahadomelina mitovy aminy rehetra.
Ny fovoaran'ny atidohan'ny olona eo amin'ny fisotroana ny toaka
Ny firafitry ny atidohan'ny olombelona
Ny fiadan'ny zava-mahadomelina ao anatin'ny vatan'olombelona
Fampitahana ny atidohan'ny olona mandray zava-mahadomelina, sy ny olona tsotra na "normale".
Ireo àry ry havana ny santionany amin'ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina eo amin'ny vatantsika olombelona, koa raha ny tempolin'Andriamanitra ve no atao toa izao dia manahoana ny alahelony? Tsarovy ry havana fa isika izao dia mitovy amin'Andriamanitra, satria Izy no efa nilaza izany, "Andeha isika hamorona olona mitovy endrika amintsika". Koa izany indrindra no tokony tsy hanaovantsika, tsinontsinona ny tenantsika. Na dia efa maro aza ny fahotana vitanao dia vonona handray anao foana ny Tompo, miadry anao, matoa ianao mbola nomeny tombon'Andro mandrakariva, tsarovy fa Izy dia miandry ny fiverenanao. Ary manomboka izao dia tano mafy Izy mba ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao.
Inona ary no voalazan'ny soratra Masina miresaka ny zava-mahadomelina sy ny toaka?
Ny fandraisana zava-mahadomelina ihany koa dia miteraka filan-dratsy eo amin'ny vatana:
Entina hamaranana azy dia aoka isika ho tia an'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, ka tsy handany ny androntsika amin'ny fiainan'izao tontolo izao ka hanaraka ilay voalazan'ny Petera hoe: « mba tsy handaniantsika ny andro sisa iainantsika amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra » (I Petera 4 : 1-2).
Ho tanteraka amintsika mianakavy anie izany tenin'Andriamanitra izany, ka mazotoa manompo ny Tompo, fa tsara Izy ary mpanao ny tsara. Koa mendrika azy ny tolorana haja sy voninahitra, ary ny dera sy laza izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ny fahasoavana amam-piadanany kosa hoamintsika tsirairay avy.